खोप कार्ड हराए के गर्ने ?
Home /जीवनशैली, समाचार/खोप कार्ड हराए के गर्ने ?
कोरोना भाइरस बढेपछि सरकारले यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न खोप कार्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी)ले सार्वजनिक ठाउँमा कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै अब कार्ड खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
झण्डै एक वर्षअघि नै खोप लगाइसकेका र विदेश आउजाउ गरिरहनु नपर्नेहरूको लागि नेपालमा यसअघि खोप कार्ड देखाइरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन । जसले गर्दा धेरैको खोप कार्ड हराउने वा नासिने समस्या देखिएको छ । तर, अहिले सीसीएमसीले एक्कासि खोप कार्ड अत्यावश्यक गराएपछि खोप लगाएकाहरू के गर्ने भन्ने दुविधामा देखिएका छन् ।
कार्ड हराएको छ भने जुन जिल्लामा खोप लगाएको हो, सोही जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयमा गएर कोरोना खोप कार्ड बनाउन सकिन्छ । कोरोना खोप लगाएको रेकर्ड सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा बुझाइने भएकाले सम्बन्धित जिल्लामै गएर नयाँ कार्ड बनाउनु पर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
हुन त, खोप कार्डभन्दा पनि कार्डको फोटोलाई अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैले कार्ड हराएको भए पनि खोप कार्डको फोटो देखाएर पनि सार्वजनिक सेवा लिन सकिन्छ । तर, नयाँ कार्ड नै बनाउनुपर्ने अवस्था भएमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने गौतमले बताए ।
हरिद्वारमा ‘मकर संक्रान्ति स्‍नान’ गर्न रोक
ओमिक्रोन संक्रमण : प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खान किन जरुरी छ ?
TAGS: खोप कार्ड